Uthembisa ukubuya ngamandla uSimbine ohlwithwe isicoco
U-AKANI Simbine umgijimi wakuleli uzibona eya ngokudlondlobala phezu kokuhlwithwa isicoco sakhe sika-100m kuma-African Championship abebanjelwe eMauritius Isithombe: BACKPAGEPIX
Xolile Mpisane | June 13, 2022
UYAFUNGA ukuthi uzobhukula kubonakala emqhudelwaneni elandelayo umsubathi wakuleli, u-Akani Simbine, ngemuva kokulahlekelwa yisicoco sakhe emjahweni ka-100m kuma-African Championships eMauritius.
USimbine noFerdinand Omanyala, babonakale beqa umugqa ngesikhathi esisodwa kowamanqamu ngoLwesine kodwa ngemuva kokuhlolwa kwesithombe umgijimi waseKenya unikezwe indondo yegolide ngesikhathi esiyimizuzwana engu-9.92, uSimbine wathola isiliva ngemizuzwana engu-9.93.
Omunye umgijimi wakuleli, uHenricho Bruintjies, ulale isithathu wabuya nendondo yethusi.
Yize ephoxekile ngokuphucwa isicoco, uSimbine ukholwa wukuthi ukuba khona komunye umgijimi oseqophelweni eliphezulu e-Afrika kuzomgqugquzela ukuthi enze kangcono.
"Bekuwumjaho onzima. Ubushubile kodwa bekungumjaho onesasasa. Sike saphazamiseka ngesikhathi kukhona oqala ukugijima ingakakhali impempe," kusho uSimbine.
“Umjaho ubumuhle kodwa kube muncu ngoba izinto zigcine zingahambanga ngendlela ebesiyilindele. Baqale bamemezela ukuthi ngiwinile, kwathi ngemuva kokuhlolwa kwezithombe kwathiwa angiphumelelanga.
"Kukhona engijabule ngakho futhi kukhona okungangiphathanga kahle. Okumqoka wukwazi ukuthi sisahamba endleleni efanele sinomqeqeshi wami.
"Kumnandi kakhulu ukuqhudelana noFerdinand. Kade ngangifuna umuntu wase-Afrika ozoba seduze kwami kweyamanqamu emiqhudelwaneni emikhulu. Sesiside isikhathi kuyimina ngedwa omela i-Afrika kule miqhudelwano, ngicabanga ukuthi kusukela ngo-2016.
"Yimina ngedwa owase-Afrika obengena kweyamanqamu e-Afrika kodwa sekuzoshintsha lokho ngokuba khona kukaFerdinand. Sizolimela ndawonye izwekazi lethu futhi siyakwazi okumele sikwenze."
AmaWorld Championships azoba se-Oregon, e-United States, kusukela ngoJulayi 15 kuze kube wuJulayi 24. Ngemuva kwalokho uSimbine uzobe ebheke ukuvikela isicoco sakhe kumaCommonwealth Games azoqala ngoJulayi 29 eBirmingham, e-England.
Uthe kuyamjabulisa ukuzibona ekhuphula izinga emjahweni ngamunye ngaphambi kwemiqhudelwano.
“Ngokwami ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ngiyabambelela ezinhlelweni zethu, ngihlanganise kahle umjaho wami, ngifinyelele kowamanqamu bese ngiyoqedela umsebenzi lapho,” kuqhuba yena.
"Isu lethu bekuwukuqinisekisa ukuthi siyathuthuka manje njengoba sizoya kumaWorld Championships. Okumnandi wukuthi ngikwazile ukugijima ngaphansi kwemizuzwana engu-10, okokuqala kule sizini.
"Lokho kuchaza ukuthi sisahamba ngohlelo ebesivele sakhela phezu kwalo endleleni ebheke emiqhudelwaneni emikhulu."
Usuku lwesine lwama-African Championships luphele iNingizimu Afrika iqhwakele ngezindondo ezingu-25, ilandelwa yiKenya ngezingu-12.
Iqembu lakuleli bese liqoqe izindondo zegolide eziyisithupha, ezesiliva eziyisishiyagalolunye nezingu-10 zethusi futhi belisekhona ithuba lokwengeza ezinye ngosuku lokugcina (obekuyizolo).
Ezegolide zinqotshwe nguJo-Ane van Dyk kwi-javelin yabesifazane, uMiranda Coetzee emjahweni wabesifazane ka-400m, uMire Reinstorf kwi-pole vault, uWerner Visser kwi-discus yabesilisa, u-Allan Cumming kwi-hammer yabesilisa no-Ischke Senekal kwi-shot put yabesifazane.